संसद् बाहिरका दलको आवाज सुन्नुपर्छ – Rajdhani Daily
२०४८ सालसम्म संसदीय अभ्यासमा हुर्किएका कृष्णबहादुर महरा २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह हुँदै यतिबेला प्रतिनिधिसभा सभामुखका हैसियतमा संसद्मा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । शान्त र शालीन स्वभावका महरा १० वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गरी मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रसम्म डोे¥याउने महŒवपूर्ण पात्रमध्येका एक हुन् । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिप्रक्रियामा आउँदा पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध विस्तारमा समन्वयकारी भूमिका उनले नै सम्हालेका थिए । त्यसयता मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि सबै दलसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण उनी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत सभामुख चयन भए । उनी नेतृत्वको संसद्सामु संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटो कानुन निर्माणदेखि समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि नीति निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । यिनै दायित्वको सेरोफेरोमा रहेर महरासँग राजधानीका लागि सविन शर्माले कुराकानी गरेका छन् ।
कृष्णबहादुर महरा, सभामुख प्रतिनिधिसभा
सबै दलको समर्थनप्राप्त साझा सभामुख हुनुभएको छ, एक महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संसद्मा करिब दुई तिहाइ मत एकातर्फ छ, यो तपाईंका लागि अवसर होला । समर्थक भए पनि एजेन्डा उठाउनमा बलियो प्रतिपक्ष छ । आफंैलाई समर्थन गराई प्रतिपक्षलाई मिलाएर लैजाने चुनौती छ भन्ने सोच्नु भएको छ नि हैन ?
संसद् भनेको जनताको भावना तथा विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा उच्च थलो हो । जनताका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित छन् । यस्तो हुने भएकाले यहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन यहाँ त जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज उठ्ने हो । आफूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेसँगै स्वतन्त्र भावना बोकेका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा संसद्लाई हेरिनुपर्छ । यही बाटोमा जाने योजना मैले बनाएको छु । संसद्मा सबैका विचार र भावना समेट्नेछु । संसद्मा सबैको विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका सभामुखको हैसियतमा मैले निर्वाह गर्नुपर्छ । म त्यो भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वहन गर्ने योजनामा छु ।
संसद्मा प्रस्तुत भएका विषयहरू सबैलाई समेट्ने मेरो पहिलो भूमिका हुनेछ । मैले सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बहुमतीय प्रणालीबाट त्यस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि संसद्मा पेस गर्ने विधयेकहरूमा सबैका भावना समेट्ने गरी आउने वातावरणका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनेछु । सरकारबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्को समन्वयमा हामी संसद्लाई मर्यादापूर्वक साझा कानुन बनाउने काममा तल्लीन हुनेछौं । जनताका सबै भावनाहरूलाई समेट्ने गरी काम गर्ने मूल योजनामा नै मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
आगामी असोजभन्दा अगाडि धेरै कानुन बन्नपर्छ । मेरो विचारमा यो अधिवेशन हामीले घनीभूत रूपमा चलाउँछौं । थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुनेछन् । सबै कानुन एकैचोटी बन्ने होइन । अहिले तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन तुरुन्तै बनाउने त्यसपछि क्रमशः बन्दै जाने काम सुरु हुन्छ ।
सामान्यतः संसद्मा हिँउदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनका रूपमा हामीले अधिवेशन चलाउँदै आएका छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणका काम हुने गरेको छ भने वर्षे अधिवेशनमा हामीले बजेट अधिवेशनका रूपमा चलाउँदै आएका छौं । यसपटक भने हाम्रो बाध्यता असोजभन्दा अगाडि कानुनहरू बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यही भएर सरकारलाई पनि तदारुकताका साथ काम गर्न भनेको छु । विधेयकहरू आउनेक्रम पनि जारी छन् । विधेयक नभएका हुनाले पहिलो अधिवेशन रोकिएको भन्ने होइन । कामकाजी अधिवेशन त अब आउने अधिवेशन नै भएको हुनाले त्यता केन्द्रित हुन खोजेका हौं ।
विगतमा तपाईंले भनेजस्तो नै हो । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ । अरू देशमा त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरू बसे पनि हुने नबसे पनि हुनेजस्तो छ । तर, नेपालको हकमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा समस्या देखिन्छ । त्यो कुरा अब क्रमशः हट्छ । किनकि संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेश सरकार बनेको छ ।
अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम, विकासका योजना र कार्यक्रम अब तल नै हुन्छन् । त्यसकारणले संघीय संसद्को कानुन बनिसकेपछि, प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका अवस्थामा गएपछि मलाई लाग्छ विकास निर्माणसम्बन्धी कुरा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भन्नुपर्ने, धाउनुपर्ने स्थिति कम हुन्छ । त्यसैले संघीय संसद्का सांसदहरू संसद्प्रति अभिरुची बढाएर जाने वातावरणको सिर्जना गर्न मैले सोच बनाएको छु । यस्तै, मन्त्रीहरू आफंै सांसदहरूले उठाएको कुरामा जवाफदेही बनाउने काम हामीले थालनी गर्ने तयारी गरेका छौं । हामीले नियमावलीमा पनि कम्तीमा एक हप्तामा दुई जना मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको अभिरुचि संसद्मा नै रहनेछ ।
सरकार र संसद्को समन्वयमा साझा कानुन बनाउ“छांै
कानुन निर्माण गर्दा अन्तिम विकल्पमा मात्रै मतदान हुन्छ
संसद्प्रति सरकारको व्यवहार उत्तरदायी देखिन्छ
प्रदेशले गति नलिएसम्म विकास कोष जरुरी छ
सबै कारबाही चलाएर संसद्लाई इन्गेज गराउ“छु
कानुन निर्माणमा दुवै सदनलाई मर्यादित र
सशक्त बनाई समन्वयमा काम हुन्छ
सांसद विकास कोषको विषय भनेको त सरकरले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले गर्ने निर्णय होइन । कति दिन्छ या दिँदै दिन्न कि त्यो सरकारले नै गर्छ ।
अब आगामी बजेट आउँदै छ । विगतको विकास कोष कायम गर्न पनि सक्छ । त्यसलाई बढाउन पनि सक्छ, सांसदहरूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्छ । बजेट आउँदासम्म हेरौं ।
यसको विषयमा भन्नुपर्दा सरकारका मन्त्रालयको संख्यालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । पहिला १५ मन्त्रालय मात्रै बनाउने भनेकोमा १८ हुँदा अहिले २१ मन्त्रालय हुन पुगेको छ । यो राजनीतिक रूपमा पनि हो । सरकारमा देखिएको संसद्का समिति बनाउने विषयमा पनि सरेको छ । अहिले नियमावली बनाउने समितिमा सबै दलका साथीहरू राखिएका छन् । सर्वदलीय प्रतिनिधित्व छ ।
सचिवालयको तर्फबाट त हामीले सात समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको हो । उहाँहरूले १० बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु भएको छ । त्यसमा पनि केही घटबढ हुन पनि सक्छ । यसको अन्तिम निर्णय लिने भनेको त प्रतिनिधिसभाले नै हो । त्यहाँ छलफल भएपछि अन्तिम रूप लिनेछ र नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
ऐन कानुनहरू बन्ने कुरामा संसद्को अन्तिम भूमिका हुन्छ नै । तर, विधेयक पेस गर्ने सरकार भएकाले विधेयक बनाउँदै गर्दा सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्दछ । त्यसपछि संसद्मा अध्यादेश गइसकेपछि पनि समितिमा छलफल गर्दा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराएर विधेयक पास हुने छ । विधेयकहरू सजिलै पास हुँदैनन् ।
यसो भनिरहँदा पनि त्यस्ता समस्या तथा गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन् । यस्ता गुनासाहरू सांसदहरूले पनि थाहा पाउन जरुरी छ । यस्ता वियष संसद्मा सांसदहरूले राखून् । यसरी आवाज संसद्मा उठेपछि निर्णय लिने समयमा अधिकतम बढी आवाज सुनेर नै त्यसमा समेटिनेछन् । कमीकमजोरी सकेसम्म दोहोरिँदैनन् ।
ठूलो आँधीबेहरी आउने किसिमले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आवाज आएको त छैन । संविधान निर्माण गर्न ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको संविधानमा त केही आवश्यक विषयहरू थप्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषय सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भएको केही कमजारीलाई सुधार गरेर सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यासमा जुट्ने समय भएको छ । पछिल्लो समयमा संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा सबैले साथ दिने वातावरण बनेको छ । केही दलहरू संसद्मा पनि सहभागी छैनन् र त्यसैले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । सुधार तथा संशोधन गर्ने विषयमा सहमतिमा हुनसक्ने विषय हो भने संविधानकै विरोधमा उत्रने सयम यो होइन । त्यस्तो विरोधले संविधानले आफूअनुकूल संशोधन गर्ने बाटो खुला राख्दाराख्दै विरोध गरेर अन्दोलन गर्दैमा त्यो अन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । संसद्मा भएका पार्टीबाहेकका पार्टीका आवाजलाई पनि संसद्मा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहना मैले गरेको छु । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलका मागको विषयमा संसद्मा सहभागी हुने सांसदहरूले स्वतन्त्र मुलुकको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा त्यस्ता आवाजलाई समेट्ने गरी जानु पर्दछ ।
नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण भएको हामीले पाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आगामी दुई वर्षभित्रै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक बस्ने गरी काम गर्न तदारुकता देखाउनु भएको छ । लामो सयमदेखि संसद् भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल अन्तिम निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेको छु । गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गामा सेनालाई सारेर पुतली बगंैचामा संसद् भवन बनाउने विषयमा प्रधानसेनापतिसँग पनि छलफल गरेको छु । हामीले संसद् भवन बनाउने विषयमा दुई तीन राउन्डमा कुरा गरिसकेका छौं । भवन निर्माण गर्नका लागि संसद्को महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन पनि भएको छ । नेपाली सेनाले पुतली बगैंचाको जग्गा संसद्लाई उपलब्ध गराउने र गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा सेनालाई दिने विषयमा करिबकरिब समझदारी भइसकेको छ । अब अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरेका छौं । दुई वर्षभित्रमा संसद् आफ्नै भवनमा सर्छ । मेरो कार्यकालमा नै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।